LiveU သည်တစ်ပြိုင်နက်တည်း Live Streams ၅၀၀ နှင့်အတူ၎င်း၏ဂီယာဆိုင်ရာစံချိန်ကိုချိုးဖျက်သည် NAB သတင်းများ | 500 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » LiveU 500 တစ်ပြိုင်နက်တိုက်ရိုက် Streams နှင့်အတူ၎င်း၏ဂလိုဘယ်ဂီယာစံချိန်ချိုး
အဆိုပါအလွန်အမင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့မက္ကစီကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်တွေရောက်ရှိနေပြီနှင့်မဲပေးသူများနှင့်မီဒီယာလွှမ်းခြုံများအတွက်မှတ်တမ်းများကိုဖဲ့။ အကြောင်းကြားတဲ့တိုင်းပြည်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် up-to-The-မိနစ်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ရလဒ်များကိုပေးဖို့, မီဒီယာ high-profile ကိုသတင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ LiveU နှင့်၎င်း၏မက္ကဆီကန်ဖက်, Magnum Soluciones Digitales အပေါ်မှီခို။ အဆိုပါရလဒ်, 500 နာရီမက္ကစီကိုတစ်အကြီးစားအပေါ် LiveU ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် HEVC နည်းပညာ၏ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှု LU600 HEVC နှင့်အခြား LiveU ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. မကြုံစဖူး 48 တစ်ပြိုင်နက်တိုက်ရိုက်စီးခဲ့ပါတယ်။
bandwidth ကိုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော့ချက်ဖြစ်ခြင်း - ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုမီဒီယာများအတွက်အဓိကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုများပါဝင်ပတ်သက်။ နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြင်ဆင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ဝန်ဆောင်မှု parameters တွေကိုထူထောင်တစ်ဦးချင်းစီကို client များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ LiveU နှင့် Magnum အကြားကြိုတင်ရက်သတ္တပတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ LU600 HEVC ယူနစ်က 1Mbps သကဲ့သို့အနိမ့် bandwidth မှာအမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်နိမ့်ဆုံးနှောင့်နှေးပေးအပ်အဖြစ်တိုက်ရိုက် transmission ကိုပါဝါရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါယူနစ်ကိုလည်းဆဲလ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျေးလက် enviroments မှာယင်း၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြလျက်ရှိသည်။
"LiveU နှင့် Magnum တို့အကြားမိတ်ဖက်ရွေးကောက်ပွဲဖုံးအုပ်မီဒီယာတစ်ခုအဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ဆောင် ခဲ့. ," ဟိုဆေးလူး Reyes, အရောင်း, လက်တင်အမေရိက၏ LiveU VP ကဆိုသည်။ "ဂီယာထောက်ပံ့အပြင်, Magnum ကင်မရာအော်ပရေတာ, On-ကင်မရာအခွက်တဆယ်နှင့်ထောက်ခံမှုထောက်ပံ့။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်စီမံခန့်ခွဲ, နှင့်အရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံဖြန့်ဝေဖို့ညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုပဲ။ "
Andre Peluffo (LiveU လက်တင်အမေရိက) နဲ့သူ့အဖွဲ့ Magnum CEO ဖြစ်သူ Jorge Camacho နှင့်သူ၏တိုက်ရိုက်အသင်းထံမှ 53 လူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မက္ကစီကိုစီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းပညာကို 500 ပစ္စည်းကိရိယာများအဖွဲ့များအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ဂီယာ၏အမြန်နှုန်းဗီဒီယိုအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနှင့်အတူမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများနှင့်ပို့လိုက်ကြတယ်မျှကြားခံ, ထုပ်နိုင်အောင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင် saturation မှကျရောက်နေတဲ့ဒေသများရှိနှောင့်နှေးပြသခဲ့သည်။
"အရ ဂြိုဟ်တု နှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ကုန်တင်ကား, နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အဦများဖြစ်စေတစ်ခု option ကိုလုပ်မတည်ရှိခဲ့ပါဘူး, "Jorge Camacho, Magnum Soluciones Digitales CEO ဖြစ်သူမှတ်ချက်ချသည်။ "ဒီဖြန့်ကျက်ခြင်း၏သက်သက်ပြင်းအားမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Magnum နှင့် LiveU အကြားပူးပေါင်းဖြစ်နိုင် 500 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအချက်ပြမှုများကိုလိုက်လျောညီထွေတစ်ခုအခြေခံအဆောက်အအုံထောက်ပံ့ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံပိုပြီးပထဝီတည်နေရာနှင့်လိုအပ်သောလျော့နည်းထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များကိုအတူဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာများအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ "
LiveU နည်းပညာ Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz နှင့်ယူကာတန်၏ပြည်နယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိသမားတွေအဖြစ်မက္ကစီကိုစီးတီးတို့ကတပ်ဖြန့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Televisa နှင့်ဒေသတွင်း Televisa ကဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်, မာလ်တီမီဒီယာ, Image ကိုအုပ်စု Mexiquense, Channel ကိုက Eleven နဲ့တခြားအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းများ။ ရေဒီယိုစခန်းများနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာစာပမြေားကိုလညျးရွေးကောက်ပွဲကိုဖုံးလွှမ်းရန် LiveU ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံး LiveU ၏လယ်-သက်သေပြကျောပိုးအိတ်ပလက်ဖောင်းကဒီကျယ်ပြန့်စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ခဲ့။
သြဂုတ်လ 2015 ခုနှစ်, Sky News, အရှိဆုံးတစ်ပြိုင်တည်းပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်သတ်မှတ်ထား 138 မဲဆန္ဒနယ်ရလဒ်များကိုကိုဖုံးလွှမ်းရန် 150 တည်နေရာကနေတိုက်ကျွေးစီးနှင့်အတူ၎င်း၏ဗြိတိန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံနေစဉ်အတွင်း LiveU နည်းပညာကို အသုံးပြု. ဖြစ်ရပ်တစ်ခုများအတွက်စီး။
4K ဆယ်လူလာ Bond HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း လှံနှင့်မြှား 2018-08-02
ယခင်: Telestream သည် ScreenFlow Video Editing နှင့် Screen Recording Software များ၏ဗားရှင်း ၉ ကိုကြေငြာခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: INM စနစ်များအင်ဒိုနီးရှားမိုဘိုင်းတီဗီပလက်ဖောင်း OONA TV ပေါ်မှာဖြန့်ဖြူးဘို့ Globecast မှ 11 အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား channel များကိုဖြန့်ဖြူး